Cinnamon: Kedu ihe ọ bụ na otu esi etinye ya na DEBIAN 10 na MX-Linux 19? | Site na Linux
pawuda ọ mara mma ma rụọ ọrụ Ebe obibi Desktọpụ, nke anyị anaghị ebipụta oge ọ bụla, nke anyị ikpeazụ post na-akọwapụta banyere ya, ihe karịrị afọ 3 gara aga.
Nke a bụ eziokwu n'ihi na, n'ozuzu, ọ bụ naanị kwuru maka ya Mint Linux, ebe ọ bụ na kwuru Ebe obibi Desktọpụ a mụrụ na nke a GNU / Linux nkesa. Ya mere, n'ime akwụkwọ a, anyị ga-elekwasị anya karịsịa Kedu ihe ọ bụ? y Kedu ka esi etinye?. N'ezie, mesie ike ihe dị ugbu a DEBIAN GNU / Linux metadistribution, na nke kachasị ọhụrụ mbipute, na nọmba 10, aha koodu Buster. Nke bụkwa ugbu a ihe ndabere maka Mwepụ MX-Linux 19 (ujo ojoo).
Onye kere ya (Linux Mint) na-ekwu na Cinnamon bụ:
"A Linux desktop na a omenala imewe, wuru na oge a na nkà na ụzụ na-ewebata ọhụrụ ọhụrụ atụmatụ. Cinnamon bụ desktọọpụ Linux nke na-enye atụmatụ ọhụụ ọhụụ na ahụmịhe onye ọrụ ọdịnala. Nhazi desktọọpụ dị ka Gnome 2 na teknụzụ Gnome Shell na-akwadoghị. Cinnamon na-eme ka ndị ọrụ nwee obi iru ala na ahụmịhe desktọọpụ dị mfe iji ma dị mma. Ngalaba Cinnamon nke Linux Mint site na GitHub
1 Ihe niile banyere Cinnamon
Ihe niile banyere Cinnamon
Ihe oru ngo na pawuda wepụtara na ụbọchị December 20 nke 2011 ma ekwupụtaara ya n’ihu ọha na 2 de enero de 2012 na blog nke Mint Linux. Versiondị nke mbụ ya gbasara Linux Mint 12 "Lisa".
Site na 2.0 mbipute, Cinnamon bu a Gburugburu Ebe Obibi Ojuju, na obughi nani ihe ndi GNOME dika GNOME Shell and Unity.
Ugbu a na-aga maka nkwụsi ike mbipute 4.4.2
Nkwenye magburu onwe ya nke ndị ukwu Linux Mint Distro.
Ọ lekwasịrị anya melite arụpụtaghị onye ọrụ na sistemụ arụmọrụ.
Na-enye a ezigbo nguzozi n'etiti ọsọ, nkwụsi ike na ojiji.
Na-amalite ịdị esịne ke repositories nke ọtụtụ Distros.
Nnọọ customizable na fechaa, karịsịa na Panel na Desktọpụ larịị site elu ntọala na ha na-aba ụba gburugburu, apụl, desktọ na ndọtị.
Ndokwa nke ndị obodo na ngwa GNOME3 n'ihi na ha abụọ na-eji GTK +.
Ọ dị mma maka ndị na-amalite wepu site na Windows gaa GNU / Linux, ebe ọ bụ na interface ya na-enye ha a dịtụ maara ikuku na n'ezie mfe iji.
Emekarị na-eri a ego buru ibu (RAM na CPU), yiri nke desktọọpụ gburugburu dị ka KDE Plasma na GNOME.
Kachasị anya iji rụọ ọrụ ngwaike osooso, yabụ ọ na - arụ ọrụ nke ọma na ezigbo kaadị eserese na ezigbo kọmputa. Otú ọ dị, ọ nwere ihe ọzọ software osooso buut mode.
Otu ihe kpatara ngwangwa ngwaike nke ngwaike na-egosikarị ekwekọghị na iji Virtual Machines, dị ka VirtualBox.
Weebụsaịtị nke Cinnamon Project
Distro Linux Mint Official weebụsaịtị
Ebee ka ịchọta ozi na / ma ọ bụ budata Gburugburu, Apple, Desklets na Extensions gbasara pawuda, ma ọ bụ lee ihe ọmụma previews, download si Distro, lee oru ngo na metụtara ìgwè, n'etiti ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ihe njikọ ndị a dịkwa iji gbakwunye ozi na pawuda:
Mint Linux Mint
Linux Mint oru ngo
Oghere banyere Cinnamon na GitHub
Arch Wiki na Cinnamon
Họrọ Cinnamon Desktop Gburugburu na ihe ọ bụla ọzọ na ịba uru ma ọ bụ set nke nchịkọta ndị ọzọ.
Cheta na: I nwekwara ike wụnye a Desktọpụ Environment dabere na pawuda mfe ma ọ bụ zuru ezu site dochie ngwugwu cinnamon site cinnamon-core o cinnamon-desktop-environment.
Reboot na nbanye site na ịhọrọ Ebe obibi Desktọpụ pawuda, ma ọ bụrụ na inwe ihe karịrị otu Ebe obibi Desktọpụ arụnyere na ọ bụghị na-ahọpụta ndị Nchịkọta Nbanye Cinnamon-nnọkọ.
Chetakwa, nke a bụ anọ post nke usoro banyere Gburugburu GNU / Linux. Nke mbụ gbasara GNOME, luego KDE Plasma y XFCE. Ezie na ndị na-esote ga-abụ ihe dị ka Nwunye, LXDE na nke ikpeazụ LXQT.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Entorno de Escritorio» amara aha «Cinnamon», nke bụ n'etiti ọtụtụ ẹdude, ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị mara na ọmụmụ ugbu a na ụwa nke «Distribuciones GNU/Linux», nwee nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Cinnamon: Kedu ihe ọ bụ na otu esi etinye ya na DEBIAN 10 na MX-Linux 19?
Site na debian ọ ghọrọ desktọpụ ọkacha mmasị m n'ihi na enwere m ike ịnweta ihe niile ngwa ngwa, gnome na KDE dị oke egwu ma nwekwuo nghọta na ee, mana anaghị m achọ ịmekwu clic iji nweta otu ebe, ịdị mfe nke pawuda, apụl na ihu igwe, czọ mkpirisi na panel ma ọ bụrụ na anyị tinye conky enwere m ihe niile ebe m chọrọ.
Nsogbu di na Debian bu na odighi adi nma dika Mint. Ga-agbakwunye, dịka ọmụmaatụ, ngwugwu-melite-egosi nke na-eme ka akara ukwu RAM dịkwuo elu.
Kedu ụdị nke etinyere na MX-Linux? Ebee ka ọ dị n'etiti ụdị "ọhụụ" arụnyere na Mint na ụdị "prehistoric" arụnyere na Debian?
Ekele, Sebas. Iwu a bụ "cinnamon apt" na-akọ ihe ndị a: cinnamon / stable 3.8.8-1 amd64